UZuma ngeke aphucwe imihlomulo - Ilanga News
Home Izindaba UZuma ngeke aphucwe imihlomulo
UZuma ngeke aphucwe imihlomulo
Akukho okuzomlahlekela ngoba akaxoshwanga ekubeni ngumengameli
KUNGENZEKA agcine edonsa izinyanga ezine kuphela ejele uMnu Jacob Zuma (osesithombeni) okuthe ngoLwesibili, walahlwa yiNkantolo yoMthethosisekelo ngecala lokudelela inkantolo, wa-gwetshwa izinyanga eziwu-15 ebhadla ejele.
Ngokomthetho, uMsholozi – njengazo zonke iziboshwa – unelungelo lokuthola ushwele.
Sekuwumlando ukuthi ugwe-
tshwa nje, indaba yaqala ngesi-khathi edikila isigcawu sikama-hluleli, uMnu Raymond Zondo esiphenya ngokuqhwagwa kwama-ndla ombuso yidlanzana, emuva kwalokho washaya phansi ngonyawo ukuphinde ayovela kulesi si-gcawu, yize wayeseyalelwe nayi-nkantolo.
Ngesikhathi inkantolo ikhipha isinqumo sayo, uNxamalala unikwe izinsuku eziwu-5 ukuba azinikele emaphoyiseni. Kulinde-leke ukuba aphume esenayo yonke imihlomulo njengomuntu owaye-ngumengameli waseNingizimu Afrika.
“Isigwebo esiphusile nesifanelekile, wukuthi uMnu Zuma athole isigwebo esiqonde ngqo, esingale-ngisiwe. Uma lokhu kungenzeki, kuzobe kusho ukuthi kuyaphela ukuhlonishwa nokuhlonipheka komthetho,” kusho isekela lenhlo-ko yamajaji, uSisi Khampepe ngesikhathi lethula isigwebo sikaZuma.
Lithe indlela uNxamalala aziphathe ngayo inobungozi kakhulu, izenzo zakhe zikhombise ukwede-lela inkantolo. UZuma unikwe ukuba akhethe ukuzinikela esiteshini saseNkandla noma esaseGoli, okuzobe kuyindlela yakhe ebheke ezikhindini.
Kumele kushaye uMsombuluko esezinikelile. Inkantolo iphinde yakhipha umyalelo othi uma ehluleka wukuzinikela, kuyomele uNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele noMkhuzi wamaPhoyisa uKhela Sitole, bathathe izinyathelo ezifanele ukuqinisekisa ukuthi uMnu Zuma uyoqala isigwebo sakhe esibekiwe.
Ngokomthetho wezamajele, iCorrectional Services Act, uZuma uzobe esengakwazi ukuthola
ushwele njengoba uthi iziboshwa ezinezigwebo ezingaphansi kwe-minyaka emibili zingadedelwa uma sezidonse ikota yezikwebo zazo.
OKULINDELEKE KWENZEKE UMA ESENGENA EJELE
Yize uMnyango wezokuHlunyeleliswa kweziMilo ungathandanga ukukhuluma ngqo ngodaba luka-Msholozi, kodwa ukuqinisekisile ukuthi zonke iziboshwa ziphathwa ngendlela efanayo.
Okhulumela lo mnyango, uMnu Singabakho Nxumalo, uthe kune-zinto ezilandelwayo uma isibo-shwa singena ejele.
Uthe kuqale kubhekwe ukuthi yonke imininingwane yaso iliqiniso yini bese kwenzeka lokho okulandelayo:-
* Kuthathwa imilobo yeminwe;
* Kuthathwa isithombe;
* Yimininingwane ephathele-ne nesiboshwa;
* Kugcwaliswa ifomu lezi-nto ezizodingwa yisiboshwa nalezo ezingaba yingozi kusona;
*Ukunikezelwa kwekhadi elinenombolo yesiboshwa;
* Ukunikezelwa kwezingubo zokugqoka, izinto zokugeza nezokulala;
* Ukubekwa kahle kwezinto zesiboshwa;
* Wukuvulwa kwefayela lesiboshwa.
Emuva kwalokho-ke, isiboshwa siyiswa lapho sizochitha khona isikhathi saso siboshiwe.
“Ukukhonjiswa kwesiboshwa indawo esizohlala kuyona nemigomo okumele siyilandele, yisigaba esibalulekile, silandelwa wuku-bhekwa kwezidingo zaso emuva kwamahora awu-6 sifikile.
“Lapha kubhekwa izinto ezipha-thelene nempilo yaso, ukuphila kahle ngokomqondo, ukubheka ukuthi ngeke yini sizibulale nokungabeka impilo yaso engcupheni,” kusho uMnu Nxumalo.
Uthi emuva kwalokho, siqashwa ngeso lokhozi isikhathi esingamahora awu-24 ngoba kujwayeleke ukuthi kube yisikhathi esinzima kakhulu.
Uphinde waveza ukuthi izibo-shwa zidla hlobo luni lokudla, wathi isidlo sasekuseni kujwayele ukuthi kube yi-cereal nobisi, isi-nkwa esigcotshwe i-magarine ne-khofi noma yitiye elinobisi.
Emini zidla isinkwa esigcotshiwe nesiphuzo, yisithelo noma yisobho. Isidlo sasebusuku kuba wukudla okungaba nenyama, yistashi, izitshalo ezimbili netiye noma ikhofi elinobisi.
Isazi samacala ezobugebengu, uDkt Guy Lamb, uthe mancane kakhulu amathuba okuthi uZuma angaphathwa njengezinye izibo-shwa, kepha kungenzeka afakwe emagunjini anabantu abangaphilile nasebekhulile kakhulu.
“Kuyacaca nje ukuthi ngeke aphathwe njengesiboshwa esijwa-yelekile,” kusho uDkt Lamb.
Isazi soMthethosisekelo, uMnu Pierre de Vos, sithe ukutholwa kukaZuma enecala akusho ukuthi uzolahlekelwa yimihlomulo eha-mbisana nokuba ngumengameli okuhlanganisa ukuba nonogada, wumhlomulo wokuvakasha,
impesheni ne-medical aid.
Uthe ukube ubexoshiwe nje-ngomengameli osaphethe, ube-ngalahlekelwa yile mihlomulo.
Previous articleIkhomishana kaZondo izogoqa umsebenzi ngoMandulo
Next articleKubukeka ezogcina kwiChiefs uMbule